Lehilahy Midera - FJKM Tranovato Ambatonakanga
FJKM Tranovato Ambatonakanga » Sampana Lehilahy Kristianina » Lehilahy Midera
Antsan-kira tany amin’ny fonja Antanimora – Teny fisaorana SLK
28 septembre 2021 5 novembre 2021 Ambatonakanga, Lehilahy Midera, Sampana Lehilahy Kristianina
Fiadanana!Maneho fisaorana ny amin’ny fiaraha-mientena sy ny fitondrana am-bavaka tamin’ny hetsika famangiana teny Antanimora ny Alahady 26 Septambra 2021 teo ny LEHILAHY MIDERA. Nampahery indrindra ny sampana izany.Mirary soa mandrakarivaSamia tahian’Andriamanitra!
Antsan-kira Fonja Antanimora – LEHILAHY MIDERA
25 septembre 2021 5 novembre 2021 Ambatonakanga, Lehilahy Midera, Sampana Lehilahy Kristianina
Ho fitoriana ny Filazan-tsara dia hanatanteraka antsan-kira ny LEHILAHY MIDERA any amin’ny Fonja Antanimora amin’ny alahady 26 Septambra 2021 maraina. Fiaraha-miasa amin’ny Aumonerie FJKM izay miasa eny amin’izany toerana izany sy ny Administration penitentiaire Antananarivo ity antsan-kira ity ary handrenesana hira 15 ka hifandrimbonan’ny mpikambana miisa 25 eo ho eo. Natao flyers ity afisy ity […]